नक्कली कार्ड र बहाना गरेर हिँड्ने सर्वसाधारणदेखि प्रहरी वाक्क ! « Bagmati Online
नक्कली कार्ड र बहाना गरेर हिँड्ने सर्वसाधारणदेखि प्रहरी वाक्क !
काठमाडौं । बुधबार दिउँसो नयाँ बसपार्कको चेक प्वाइन्टमा पुग्दा मोटरसाइकलामा रहेका युवा प्रहरीले तयार गरेको घेराभित्र थिए । केहीलाई प्रहरीले रोक्दै पठाइरहेको थियो भने केहीलाई त्यही उभ्याइएको थियो । उनीहरुलाई त्यही रोक्नुको एकमात्रै कारण, उनीहरुले निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेका थिए । ती युवाहरुले आफू बाहिर हिँड्नुको कारण पुष्टि गर्न सकेका थिएनन् । घेराभित्र रहेका एक युवक भन्दै थिए, ‘साथीकोमा हिँडेको फन्दामा परियो । ननिस्किनुपर्ने रहेछ ।’
निषेधाज्ञाको समयमा विभिन्न वहाना गरेर हिढ्नेलाई रोकेर आफूहरुले कारवाही गरेको महानगरिय ट्राफिक प्रहरी वृत महाशाखा नयाँ बसपार्क बाट खटिएका खटिएका प्रहरी अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कोही मिति सकिएको चेक बोकेर पैसा निकाल्न बैंक हिडेको भनेर बहाना गर्नेछन्, कसैले अरुको कार्ड बोकेर हिडेको पनि पाइएकाले होल्डमा राखेका हौँ । सम्झाई बुझाई गरेर हामीले उहाँहरुलाई छोड्ने गर्छौ । कतिपय अत्यावश्यक कामका लागि नै हिडेको पाएका छौँ । अस्पताल हिँडेका र अन्य कर्मचारीहरुलाई हामीले छाडेका छौँ । तर बहाना बनाएर हिडेकाहरुलाई हामी होल्ड गराउछौं । त्यसकारण हामीलाई समस्या खडा भएको छ।’
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना महामारी दिनदिनै भयावह किसिमले बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणले त्यति धेरै सजगता भने अपनाइएको पाइएन । मुख्यगरी चक्रपथ, नयाँ बसपार्क आसपासका क्षेत्रमा सवारी साधनहरू निषेधाज्ञामा पनि बाक्लै मात्रामा चलिरहेका छन् । खानेपानी, खाद्यान्न, औषधि लगायतका सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीहरू चलेकाले सवारीको चाप बढेको ट्रफिक प्रहरीहरूको भनाइ छ । कतिपय सवारी साधन रोकेर सोध्दा साथीभाई भेट्न हिँडेको वा यस्तै कुनै बहाना बताउने गरेको महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुका इन्सपेक्टर रमेश विष्टले बताउनुभयो ।
गोंगबु र नयाँ बस पार्कको अगाडि निषेधाज्ञा उल्लघंन गर्नेहरुलाई उभ्याएर होल्ड गराइने इन्सपेक्टर विष्टले बताउनुभयो। महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुले ३ दिनमा अनुमतिविनै हिँडेका ७० सवारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो । ती सवारीहरु बालाजु देखि चक्रपथसम्मका सडकबाट नियन्त्रणमा लिइएको उहाँको भनाइ छ ।
उता महानगरीय ट्राफिक प्रहरी परिसर सातदोबाटोले पनि बहाना गरी निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने सर्वसाधारणहरु धेरै रहेकाे भन्दै नियन्त्रणमा लिन चुनाैती बढेकाे जनाएको छ । परिसरका इन्सपेक्टर नरेशबहादुर शाहीले २-३ दिनअघि नक्कली मिडिया कार्ड, कार्यालयको नक्कली कार्ड देखाएर हिँड्ने सर्वसाधारणहरु पाइएको बताउन भयो । उहाँले निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेहलाई ७ बजेसम्म बाइक नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरेको पनि बताउनुभयो । त्यस्तै हिँडेर आएका सर्वसाधरणहरुलाई २० मिनेट होल्ड गराएर सम्झाई-बुझाई गर्दै आएको पनि शाहीले बताउनुभयो । कतिपय नक्कली कार्ड लिएर आउनेलाई सम्बन्धित कार्यालयमै पुर्याइदिएको पनि उहाँ बताउनुहुन्छ । यद्यपि प्रहरीले गरेको कडाइ र कारवाहीमा पर्ने डरले हिजो र अस्तिको तुलनामा बुधबार उल्लंघन गने सर्वसाधारणहरु अलिक कम पाइएको शाहीले बताउनुभयो ।
मुख्य बजार र रिङ रोडभन्दा भित्रका साना बजार, गल्लीमा पसलहरु निषेधाज्ञामा पनि प्रायः दिनभर खुलै देखिन्छन् । केही पसलहरू पूर्ण रुपमा बन्द भए पनि कतिपय लुकीछिपी खुलै राख्ने गरेकाे देखिन्छ । सरकारले मंगलबारबाट अझै कडाइ गर्ने रणनीति अनुसार बिहान ९ बजेसम्म मात्रै पसल सञ्चालन गराउन अनुमति दिएपछि व्यापारीहरुले ठाउँ-ठाउँमा सटर खोलेको पाइएको छ । कुनै ठाउँमा आधा सटर खोलेर सामान दिने गरेको पाएको थियो भने कुनै ठाउँमा खुलमखुल्ला पसल संचालन भइरहेका देखिए । कतिपयले भने प्रहरी आएको बेला बन्द गर्ने र गएपछि पुनः खोल्ने गरेका हुन् ।
उता, प्रहरीले भने आआफ्नो क्षेत्राधिकार तथा कार्य क्षेत्रअनुसार काम गरिरहेको दाबी गरेको छ । प्रहरीकाे मात्रै सक्रियताले निषेधाज्ञा सफल पार्न गाह्राे हुने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । यसमा सर्वसाधारण, व्यापारी, व्यवसायी लगायत सबैले सहयाेग गरेमा महामारी नियन्त्रण सजिलाे हुने अधिकारीहरूकाे भनाइ छ । सरकारले तीव्र रूपमा फैलिरहेकाे कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्ट रोकथामका लागि बैशाख १६ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक बाहेक अन्य कुनै सेवा संचालन गर्न पाइँदैन ।
खाद्यान्न किन्नका लागि बिहान ९ बजेसम्म मात्रै पसल खुला गर्न दिइएको छ । अत्यावश्यक कामै नपरे घरबाहिर निस्कन पाइँदैन । निषेधाज्ञाकाे नियमअनुसार नै सरकारी, गैरसरकारी सबै खाले कार्यलयले एक चौथाइ कर्मचारी मात्रै कार्यालयमा राखेर काम गरिहेका छन् । वित्तीय संस्थाहरुलाइ २० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी राखेर कार्यलय संचालन अनुमति दिइएको छ । प्रायः घरबाटै अनलाइन माध्यमबाट काम गर्न र सेवा प्रवाह गर्नमा सरकारले जाेड दिएकाे छ । साभार : न्यूज २४